ဆရာမ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကိုယ်သင် တဲ့ ကလေး တစ်ယောက်အပေါ် သေချာ နားလည်နိုင်စွမ်း မရှိအောင် ညံ့ဖျင်း မှုကြောင့် ကိုယ် တို င်ပြန် တော င်းပန် လိုက် ရ သော ဆရာမ တစ်ဦး ရဲ့အဖြစ် – The News Post
ဆရာမ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကိုယ်သင် တဲ့ ကလေး တစ်ယောက်အပေါ် သေချာ နားလည်နိုင်စွမ်း မရှိအောင် ညံ့ဖျင်း မှုကြောင့် ကိုယ် တို င်ပြန် တော င်းပန် လိုက် ရ သော ဆရာမ တစ်ဦး ရဲ့အဖြစ်
July 19, 2020 By thu han soe Knowledge
ဆရာမ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကိုယ်သင် တဲ့ ကလေး တစ်ယောက်အပေါ် သေချာ နားလည်နိုင်စွမ်း မရှိအောင် ညံ့ဖျင်း မှုကြောင့် ကိုယ်တို င်ပြန် တောင်းပန်လိုက်ရ တဲ့ ဆရာမတစ်ဦး ရဲ့အဖြစ်
ကျွန်မက ဘွဲ့ရတာ မကြာသေးတဲ့ မှုလတန်းပြ ဆရာမ တစ်ဦးပါ။ ကျွန်မသင်တဲ့ အတန်းမှာ မျောက်လောင်း ၃၆ယောက် ရှိတယ်။ အဲဒီ မျောက်လောင်းလေးတွေ ဗြောင်းဆန်အောင် ဆော့တဲ့အချိန်၊ သင်္ခန်းစာတွေ မလုပ်တဲ့အချိန်၊ ပြောစကား နားမထောင်တဲ့ အချိန်ဆိုရင် ဆရာမ အလုပ် ကို ရွေးမိတာ မှားပြီလားလို့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ကျွန်မ နောင်တရတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ အပြုံးတွေကို မြင်ရင် အဲဒီနောင်တတွေက အဝေးကို လွှင့်ထွက်သွားပြန်ရော။ ဒီကလေးတွေကို ကျွန်မသံယောဇဉ် ရှိသလို ဒီဆရာမ အလုပ်ကိုလည်း ကျွန်မ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတယ်။
“မောင်ဝေယံ” လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က ကျွန်မကို ခေါင်းတော်တော် ကိုက်စေတယ်။ ပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာတိုင်း ပြီးအောင်မလုပ်တဲ့အပြင် စာမေးပွဲတိုင်းမှာ ရမှတ်က ၂၀ အောက်ချည်းပဲ။ အုပ်ထိန်းသူ လက်မှတ်ထိုးရမဲ့ နေရာမှာ အမြဲတမ်း ဗလာဖြစ်နေတတ်ပြီး ထီးထီးနေတတ်တဲ့ သူ့ကြောင့် ကျွန်မ စိတ်ပူပြီး စိုးရိမ် ခဲ့မိတယ်။ မှုလတန်းပဲ ရှိသေးတဲ့ အရွယ်မှာ ဒီလောက်ညံ့နေရင် နောင်ဘယ်လို ရှေ့ဆက်လျှောက်မလဲ… ၊ ကလေးတစ်ယောက် ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့အတွက် အခြေခံက စပြီး သင်ပေးရတဲ့ ဆရာမက အဓိက ကျတယ်။ နာနာရိုက်မှ အိုးကောင်းရ ဆိုသလို သူကလေး လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင် ကျွန်မမှာ တာဝန်အများကြီးရှိနေပါတယ်။
အိမ်စာ မလုပ်ခဲ့လို့ သူ့ကို အပြစ်ပေးလဲ မထူး ခဲ့ဘူး။ ဆူလဲ မတိုးတက်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မ ဆိုဆုံးမလိုက်တဲ့ စကားတိုင်းကို “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ” ဆိုပြီး သူက ခေါင်းညိတ်ထောက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်စာကို ပုံမှန် မလုပ်မြဲ၊ စာမေးပွဲတွေ ကျမြဲပါပဲ။ ဒီကလေးကို ဘယ်လို သွန်သင်မှ ဖြစ်ထွန်းမယ်ဆိုတဲ့ အကြံကို ကျွန်မ နည်းနည်းမှ မထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
“မင်္ဂလာပါ ဆရာမ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ”
“အေး..အေး.. အိမ်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်ပြန်ကြနော်။ အိမ်စာလုပ်ခဲ့ကြဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ ခေါင်းစဉ်က “ကျွန်တော်၏ မိသားစု” အားလုံး မှတ်မိကြတယ်နော်”
“မှတ်မိပါတယ် ဆရာမ” ကလေးတွေ ပြိုင်တူအော်ရင်း တာက လွှတ်လိုက်တဲ့ ရေလို တဝုန်းဝုန်းနဲ့ အခန်းအပြင်ကို တိုးဝှေ့လို့ ထွက်သွားကြတယ်။
“ မောင်ဝေယံ ဆရာမဆီ ခဏလာခဲ့ဦး” လွယ်အိတ်ကို ကောက်လွယ်ပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ ပြင်နေတဲ့ သူ့ကို ကျွန်မ ခေါ်လိုက်တယ်။
“ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ” လက်လေးပိုက်လို့ တရိုတသေ ကျွန်မဆီ သူရောက်လာခဲ့တယ်။
“ပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာကို မနက်ဖြန် တင်ရမယ်နော်။ အရင်တစ်ပတ်က ဆွဲခိုင်းလိုက်တဲ့ ပုံလည်း မတင်သေးဘူး။ မြန်မြန်ဆွဲပြီး တင်နော်. ကြားလား မောင်ဝေယံ”
“ ဟုတ္ကဲ့ ဆရာမ”
အဲဒီ တစ်ခွန်းပါပဲ။ သူ့ဆီက အဲဒီစကားကို ကျွန်မ ဘယ်နှကြိမ်မြောက် ကြားခဲ့ပြီလဲ မရေမတွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ” လို့ ဖြေလိုက်တိုင်း သူ့မျက်နှာဟာ တကယ့်လိမ္မာပြီး ပြောစကားကို နားထောင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ အပြစ်ကင်းစင်လို့နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မသိလိုက်တယ်။ ပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာတွေရဲ့ ပြီးနိုင်ချေဟာ “ဟုတ်ကဲ့” ဆိုတဲ့ ကတိရဲ့နောက်မှာ ရာခိုင်နှုန်း နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဆိုတာ။ ကျွန်မကို ပြုံးပြပြီး အခန်းထဲက တရိုတသေ ထွက်သွားတဲ့ သူ့နောက်ကျောကို ငေးကြည့်ပြီး ကျွန်မ သက်ပြင်းချမိတယ်။ တကယ်တော့ မောင်ဝေယံက အိမ်စာတွေ နောက်ကျမှတင်တတ်ပေမဲ့ လိမ္မာသိတတ်တဲ့ ကလေးတစ်ဦးပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပေးလိုက်တဲ့ သင်္ခန်းစာတွေကို သူအချိန်မီ တင်နိုင်ပါစေလို့သာ ကျွန်မဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
“အိမ်စာတွေ လုပ်လာကြပြီလား ကလေးတို့… စာအုပ်ကို ခုံပေါ်တင်ထားလိုက်ကြ.. အတန်းခေါင်းဆောင် လိုက်သိမ်းလိုက်မယ်။ တလက်စထဲ ဘယ်သူတွေ မတင်သေးလဲဆိုတာ ဆရာမကို မှတ်ထားပေးပါ”
“ကျွန်တော်တို့ တင်လိုက်ပြီ ဆရာမ”
“ဆရာမ မောင်ဝေယံ မတင်ဘူးခင်ဗျာ”
“မနေ့က ဆရာမ သေချာမှာလိုက်တယ် မဟုတ်လား။ ဘာလို့ ပြီးအောင် မလုပ်ခဲ့တာလဲ။ အတန်းနောက်မှာ သွားရပ်နေစမ်း” ကျွန်မ အပြောကို သူခေါင်းငုံ့ပြီး နားထောင်နေပေမဲ့ ဘာဆင်ခြေမှ မပေးခဲ့သလို စိတ်ဆိုး ဝမ်းနည်းဟန်လည်း မပြခဲ့ဘူး။
“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ” လို့ ထုံးစံအတိုင်း ဖြေပြီး အတန်းနောက်မှာ တိတ်တဆိတ်သွားရပ်လို့ နေတယ်။
“သင်္ချာစာအုပ်ထုတ်ပြီး စာမျက်နှာ ၆၄ ကို ဖွင့်လိုက်ကြ” မောင်ဝေယံကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး ကျွန်မ စာစသင်လိုက်တယ်။ ကလေးတိုင်းက စိတ်ပါလက်ပါ ကျောက်သင်ပုန်းကို စူးစိုက်ကြည့်နေကြပေမဲ့ မောင်ဝေယံတော့ မပါခဲ့ပါဘူး။
ကျောင်းဆင်းမှ ရုတ်တရက်ရွာချလာတဲ့ မိုးကြောင့် ထီးမပါတဲ့ ကျောင်းသား တော်တော်များများက ကျောင်းဝ ဆင်ဝင်အောက်မှာ မိုးအတိတ်ကို စောင့်နေကြတယ်။ ဖုန်းရုံမှာလည်း ကျောင်းသားတွေ တန်းစီလို့ အိမ်ကို လာကြိုဖို့ ဖုန်းဆက်နေကြတယ်။ ကျောင်းသားတွေကြားမှာ မောင်ဝေယံကို ကျွန်မ တွေ့လိုက်မိတယ်။ သူ့အလှည့်ရောက်ဖို့ တစ်ယောက်ပဲလိုလို့ ကျွန်မလည်း သူ့အပြုအမှုတွေကို အကဲခတ်ဖို့ ရပ်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ သူ့အလှည့်ရောက်တော့ ဖုန်းခပေးပြီး ဖုန်းနံပါတ်ကို နှိပ်မယ်လုပ်ပြီးခါမှ ဖုန်းကို ကောက်ခါငင်ခါ ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းငိုက်စိုက်ပြီး မိုးရေထဲ လျှောက်သွားလိုက်တယ်။
သူ့အပြုအမှုကို မြင်တော့ ကျွန်မ အံ့သြသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်… ထီးကို အမြန်ဖွင့်ပြီး သူ့နောက် ကျွန်မ အပြေးလိုက်ခဲ့တယ်။
“ မောင်ဝေယံ .. ဘာဖြစ်တာလဲ.. အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး လာမကြိုခိုင်းဘူးလား” ထီးမိုးပေးပြီး သူရှေ့မှာ ဒူးထောက်ချရင်း ကျွန်မ မေးလိုက်တယ်။
“ရတယ် ဆရာမ၊ ကျွန်တော်ဘာသာ ပြန်လိုက်မယ်”
“မိုးတွေ ဒီလောက်ကြီးနေတာ၊ ဖျားလိုက်မယ်။ လာခဲ့ ဆရာမ လိုက်ပို့မယ်”
“ကိစ္စမရှိဘူး ဆရာမ၊ ကျွန်တော့်အိမ်က ကျောင်းရှေ့မှာတင် ခဏလေးဆို ရောက်ပြီ”
“ဆရာမမှာ ကားပါတယ်။ ဒီထီးယူသွားလိုက် သေချာပြန်ဦးနော်” စိုနေ တဲ့ သူ့ခေါင်းကို ကျွန်မပွတ်သပ်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ” ထီးကို လှမ်းယူပြီး ကျွန်မကို ပြုံးပြရင်း မိုးရေထဲ သူတိုးဝင်သွားတယ်။
အပြန်လမ်းရဲ့ မိုးသဲထဲမှာ ကားကို ဂရုတစိုက်မောင်းရင်း လမ်းထက်ဝက် ရောက်တော့ ကျွန်မရဲ့ ဖုန်း နားနေခန်းမှာ ကျန်ခဲ့တာကို သတိရမိလိုက်တယ်။ မေ့တတ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်ရင်း ဖုန်းပြန်ယူဖို့ ကားကို ပြန်ကွေ့လိုက်တယ်။ ကားရှေ့မှန်ပေါ်က သဲသဲမည်းမည်းကျလာတဲ့ မိုးရေတွေကို ရေသုတ်တံက အဆက်မပြတ် ဖယ်ရှားလို့နေတယ်။ မီးပွိုင့်တစ်ခုမှာ ကျွန်မ ရပ်စောင့်နေတုန်း ရင်းနှီးနေတဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခုကို မိုးရေထဲမှာ ကျွန်မ မြင်လိုက်မိတယ်။ မောင်ဝေယံပါလား… ခြံဝင်းတစ်ခုထဲ သော့ဖွင့်ပြီး သူဝင်သွားတာကို တွေ့လိုက်တယ်။
“သူ ဒီမှာနေတာလား.. သူ့အိမ်က ကျောင်းရှေ့မှာဆို” ကျွန်မ တအံ့တသြ အသံတိတ် ရေရွတ်လိုက်မိတယ်။
ကျောင်းနဲ့ နှစ်ကီလိုမီတာလောက် ဝေးတဲ့ အိမ်ကို မိုးရွာထဲမှာ အသက်(၆)နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်က လှမ်းလျှောက်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မ ဝမ်းနည်းသွားမိတယ်။ အိမ်က ကျောင်းရှေ့မှာတင်လို့ ဘာကြောင့် ကျွန်မကို သူလိမ်ခဲ့ပါလိမ့်… ကျွန်မကို ကြောက်လို့လား… ကျွန်မ လိုက်ပို့မှာကို အားနာလို့လား…
မီးစိမ်းလို့ နောက်က တီးလိုက်တဲ့ ကားဟွန်းသံကြောင့် ကျွန်မ အတွေးစကိုဖြတ်ပြီး လီဗာကို ဖိနင်းလိုက်တယ်။
“ ဟော … မောင်ဝေယံ လာခဲ့”
“ဆရာမကို ထီးပြန်လာပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ”
ငှားသွားတဲ့ထီးကို ပြန်ပေးဖို့ သူအမှတ်ရတတ်နေပြီး ပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာကိုကျတော့ ဘာလို့ အမှတ်မရတတ်တာလဲလို့ တရိုတသေ လှမ်းပေးလိုက်တဲ့ ထီးကို ယူရင်း ကျွန်မ တွေးလိုက်မိတယ်။
“ မောင်ဝေယံ ဆရာမ တစ်ခုမေးစရာရှိလို့။ မောင်ဝေယံရဲ့ အိမ်က ကျောင်းရှေ့မှာပဲဆို”
ခေါင်းငုံ့နှုတ်ဆိတ်နေတဲ့ သူ့ကို ကြည့်ပြီး အလိမ်ပေါ်သွားမှန်း ကျွန်မ သိလိုက်တယ်။
“ကိစ္စမရှိဘူး မောင်ဝေယံ အမှန်အတိုင်းပြော ဆရာမ အပြစ်မပေးပါဘူး”
“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ မနေ့က ကျွန်တော်လိမ်ပြောမိတာပါ”
“ဆရာမကို ဘာဖြစ်လို့ လိမ်ရတာလဲ”
“ဆရာမ လိုက်ပို့မယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော် အားနာလို့ပါ”
ကြည့်စမ်း… အသက်နဲ့ မလိုက်အောင် ဖြေလိုက်တာ သူ့အဖြေက ကျွန်မတောင် ထင်မှတ်မထားဘူး။
“အားမနာပါနဲ့ လမ်းကြုံနေတာပဲ.. နောက်တစ်ခါ ဆရာမကို မလိမ်ရဘူးနော်”
“ကောင်းပြီ.. စာသင်ခန်းထဲ ပြန်တော့ အိမ်စာတွေ လုပ်ခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်”
လှည့်ထွက်သွားတဲ့ သူ့ကို ငေးရင်း “ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေကို ပြင်လိုက်ရင် ဒီကလေးကတော့ ပြောစရာ မရှိအောင်ကို လှပပြည့်စုံသွားမှာပဲ” လို့ တွေးလိုက်မိတယ်။
လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကိုင်ပြီး မြူးနေတဲ့ ပုံစံ နဲ့ အပြေးတစ်ပိုင်း လာနေတဲ့ မောင်ဝေယံကို ကျွန်မတွေ့လိုက်တယ်။
“ဆရာမ.. ကျွန်တော် အိမ်စာပြမလို့”
“ဟာ.. တကယ်လား.. ကြည့်စမ်း…အိမ်စာ တကယ်လုပ်ခဲ့ပြီ။ လိမ္မာလိုက်တာ.. လာ.. ဆရာမ ဆုချမယ်”
အိတ်ထဲက ချိုချဉ်တစ်လုံးကို ယူပြီး သူ့ကို ကျွန်မ ကမ်းပေးလိုက်တယ်။
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ” ဝမ်းသာအားရနဲ့ ချိုချဉ်ကို အင်္ကျီအိတ်ကပ်ထဲ သေချာထည့်ပြီး ကျွန်မကို သူပြုံးပြတယ်။
ကျွန်မလည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အိမ်စာတွေကို အချိန်ဆွဲလုပ်နေရာက ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့ သူလုပ်လာတတ်တာကို ကျွန်မသတိထားလိုက်မိတယ်။ သူအိမ်စာတင်တဲ့အတွက် ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး ကျွန်မ ပျော်နေမိတယ်။ ကွေးကွေးကောက်ကောက် ရေးထားတဲ့ လက်ရေးနဲ့ ခဲဖျက်ရာ အထပ်ထပ် ဖျက်ထားတဲ့ သူ့စာတွေကို ကျွန်မ ချက်ချင်းဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။
“ကျွန်တော်၏ မိသားစု” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာက ရှင်းရှင်းလေး…..
“ကျွန်တော့်မှာ မိသားစု သုံးဦးရှိတယ်။ ဖေဖေ၊ မေမေနဲ့ ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။ ဖေဖေက အရမ်းခန့်သလို မေမေလည်း အရမ်းချောပါတယ်။ ဖေဖေက နေ့တိုင်း ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ရသလို ကျွန်တော်ကလည်း နေ့တိုင်း ပင်ပင်ပန်းပန်း ကျောင်းတက်ရတယ်။ မေမေက ကံအကောင်းဆုံးပေါ့။ နေ့တိုင်း အိမ်မှာပဲနေပြီး ကျွန်တော်နဲ့ ဖေဖေပြန်အလာကို စောင့်နေရုံပါပဲ။ တစ်ခါတလေ မေမေ့ကို ကျွန်တော်အရမ်းအားကျတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မိဘက မကြာခဏ ရန်ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ဖေဖေနဲ့ မေမေက တစ်ခါမှ ရန်မဖြစ်ကြဘူး။
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ မိသားစုဟာ အမြဲ ပျော်ရွှင်နေတယ်။ သင့်မြတ်နေတယ်။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆိုရင် ဖေဖေ၊ မေမေတို့နဲ့ ဗီဒီယို ကြည့်ရတာကို ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဖေဖေက အလုပ်များလို့ ကျွန်တော်နဲ့အတူ အမြဲတမ်း အပြင်ထွက် မကစားနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အခုလို အတူတူနေရတာကိုပဲ ကျွန်တော်ပျော်တယ်။ ဖေဖေနဲ့ မေမေကို ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တယ်”
ဖတ်ပြီး ကျွန်မ အသံထွက် ရယ်လိုက်မိတယ်။ ကျောင်းတက် ရတာကို ပင်ပန်းတယ်ထင်ပြီး အိမ်မှာနေတဲ့ အမေ့ကို အားကျတယ်လို့ ပြောတဲ့ သူ့ကို အိမ်ရှင်မ တာဝန်ဟာ ပိုပင်ပန်းတဲ့အကြောင်း ကျွန်မ ပြောပြဦးမယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ သူ့စာကို ဖတ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူဟာ ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာမှန်း ပိုသိသာစေတယ်။
“ဆရာမ.. ဆရာမ.. ရန်ဖြစ်နေကြပြီ” လို့ အော်လိုက်တဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ရဲ့ အသံက မောင်ဝေယံရဲ့ စာကို ဖတ်ပြီး ဝမ်းသာနေတဲ့ ကျွန်မရဲ့စိတ်ကို ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်သွားစေတယ်။ ကလေးတွေ ရန်ဖြစ်မှာကို ကျွန်မ အကြောက်ဆုံးပါ။ ခိုက်မိပြီး သွေးထွက်လာတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ၊ ရောင်လာတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို အုပ်ထိန်းသူတွေ နားလည်အောင် ရှင်းပြရတဲ့အလုပ်ကို ကျွန်မ အကြောက်ဆုံးပါ။ ရန်ဖြစ်တဲ့ နေရာကို ကျွန်မ အပြေးလေး သွားလိုက်တယ်။
“ ဝေယံ… အောင်အောင် ရန်ဖြစ်တာကို ရပ်လိုက်စမ်း” ကျွန်မ အော်သံကို ကြားတော့ လုံးထွေးနေသူနှစ်ယောက် ချက်ချင်းရပ်တန့်သွားတယ်။
“ ဘာဖြစ်လို့ ရန်ဖြစ်တာလဲ”
“သူ့ ကျွန်တော့်ကို အရင်ထိုးလို့ ဆရာမ”
“ဝေယံ ဘာဖြစ်လို့ အောင်အောင်ကို ထိုးရတာလဲ”
“ဆရာမ ပေးထားတဲ့ ကျွန်တော့်ချိုချဉ်ကို သူလုလို့ .. ပြန်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တောင်းတော့ သူမပေးဘူး”
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆို ရန်မဖြစ်ရဘူး ကြားလား… အောင်အောင်လည်းမှတ်ထား .. သူတစ်ပါး ပစ္စည်းကို လျှောက်မယူရဘူး ကြားလား…အချင်းချင်း လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး တောင်းပန်ကြ”
အမြဲတမ်း တစ်ယောက်တည်း ထီးထီးနေတတ်တဲ့၊ လူတွေနဲ့ အရောမဝင်တတ်တဲ့ မောင်ဝေယံတစ်ယောက် ချိုချဉ်လေး တစ်လုံးကြောင့် လူတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီချိုချဉ်ဟာ သူ့အတွက် တော်တော် တန်ဖိုးကြီးနေပုံရတယ်။
ကျောင်းဆင်းတော့ ဆင်ဝင်အောက်မှာ ရပ်နေတဲ့ သူ့ကို ကျွန်မတွေ့လိုက်ပြန်တယ်။
“မောင်ဝေယံ ဘယ်သူကို စောင့်နေတာလဲ”
“ကျွန်တော့်ဖေဖေ လာကြိုမယ် ပြောလို့ ဖေဖေကို စောင့်နေတာ”
“အော်.. မောင်ဝေယံ မိဘအစည်းအဝေးဖိတ်စာကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းထားတာ မောင်ဝေယံ ပြန်မပေးသေးဘူးနော်။ မနက်ဖြန် ယူခဲ့ရင် ဆရာမ ချိုချဉ်တစ်ထုပ် ဆုချမယ်” ချိုချဉ်တစ်လုံးကြောင့် ရန်ဖြစ်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ကျွန်မယူလိုက်တယ်။
“တကယ်လား ဆရာမ” သူ့မျက်လုံးလေး ဝင်းခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။
“ကြည့်စမ်း.. ဆရာမ ချိုချဉ်တောင်ယူခဲ့တယ်။ မင်းက ဖိတ်စာကို မေ့ခဲ့ပြန်ပြီ”
“ကျွန်တော် တကယ်မေ့ခဲ့လို့ပါ ဆရာမ”
“ဒါဆို မင်းချိုချဉ်မစားရတော့ဘူး။ အရင်ပတ်က သင်္ခန်းစာတွေ ပြီးအောင်လုပ်ရင် ဆရာမ ဒီချိုချဉ်တွေနဲ့ ဆုချမယ်”
နားနေခန်းကို ရောက်တော့ အစည်းအဝေးတက်ဖို့ လူတွေကို စာရင်းပြုရင်း မောင်ဝေယံရဲ့ မိဘတွေ အစည်းအဝေး တက်နိုင် မတက်နိုင်ကို မေးဖို့ မေ့ခဲ့တယ်။သူ့စာထဲမှာ မေမေက နေ့တိုင်းအိမ်မှာ ရှိတယ်ဆိုလို့ သူ့အိမ်ကို ဖုန်းဆက်မေးဖို့ ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သုံး လေးကြိမ်ဆက်ပေမဲ့ ဖုန်းသာမြည်ပြီး လာကိုင်တဲ့လူ မရှိခဲ့ဘူး။
ခုတစ်လော ကျွန်မရဲ့ ချိုချဉ်အစွမ်းကြောင့် မောင်ဝေယံ စာတွေကို မှန်မှန်လိုက်လုပ်လာတယ်။ ကျွန်မ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ သူ့ကို တော်ကြောင်း လိမ္မာကြောင်း ချီးကျူးမိရင် သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်တဲ့ အပြုံးတွေ၊ အားရတဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ လင်းလက်လို့ သွားတယ်။
“ဆရာမ .. ဆရာမ.. မောင်ဝေယံ တော်တော်ထူးဆန်းတယ်”
တစ်နေ့မှာ အတန်းထဲက ကလေးမတစ်ယောက် ကျွန်မကို အဲဒီလို ပြောလာပါတယ်။ ကျွန်မ နားမလည်စွာနဲ့ “ဘာဖြစ်တာလဲ.. မောင်ဝေယံ ဘာလုပ်ပြန်ပြီလဲ”
“သူ့အမေဆီ ဖုန်းဆက်နေတာ တွေ့လို့”
“သူ့အမေဆီ ဖုန်းဆက်တာများ ဘာများထူးဆန်းနေလို့လဲ”
“သူပြောတဲ့ စကားတွေက ထူးဆန်းနေတာ ဆရာမ”
“ သူက… မေမေ.. ဒီနေ့သား ကျောင်းစာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လို့ ဆရာမက သားကို ချိုချဉ်ဆုချတယ် သိလား မေမေတဲ့။ ဒါကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောနေသေးတယ်။ အိမ်ရောက်မှ ပြောလဲ ရရဲ့သားနဲ့နော် ဆရာမ”
“ဟုတ်တယ်..ဟုတ်တယ်… အိမ်ရောက်မှ ပြောတော့ ဘာဖြစ်လဲနော်”
“ဆရာမ.. သူ့အမေဆီ ဒီလို ဖုန်းဆက်တာ သားလဲ ခဏခဏ မြင်ဖူးတယ်”
ကျောင်းသားတွေက တစ်ယောက် တစ်ပေါက် ဝိုင်းထောက်ခံကြတယ်။
“ မောင်ဝေယံက သူ့အမေကို ဝမ်းသာစေချင် လို့ ကျောင်းမဆင်းခင် ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်မှာပေါ့။ သူလည်း သားတို့ သမီးတို့လို လိမ္မာပါတယ်။ အိမ်စာတွေ၊ သင်္ခန်းစာတွေ နောက်ကျမှ တင်တတ်ပေမဲ့ သူ့မှာလည်း သူ့ကောင်းကွက်တွေ ရှိပါတယ်။ ကဲ..ကဲ အားလုံး ချစ်ချစ် ခင်ခင်နေကြနော်”
ကျောင်းသားတွေ အားလုံး မောင်ဝေယံ ရဲ့ အပြုအမှုကို သံသယ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ထီးထီးနေတတ်ပြီး လူတွေနဲ့ အပြောအဆိုနည်းတဲ့ သူ့ကို ကျွန်မအချိန်တွေယူပြီး အကောင်းဖက်ကို တဖြေးဖြေး သင်ယူနေတုန်းမှာ သူ့ကြောင့် ဘာပြဿနာမှ ထပ်မတက်စေချင်ပါဘူး။
စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်နေ့။ ဒီနေ့က ကျွန်မအတွက် ဆရာမဘဝရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော “ဆရာများနေ့” ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ စိတ်တွေ ကြည်လင် လန်းဆန်းလို့နေတယ်။
“ဆရာများနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆရာမ.. ဆရာမ ဒါသမီး ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတဲ့ ကတ်ကလေး”
“ဆရာမအတွက် ဒါသမီးတို့ခြံက နှင်းဆီပန်း”
“ဆရာမ သားမှာလည်း ရှိသေးတယ်”
“ဆရာမ အထဲမြာ ဘာထုပ္ထားသလဲ သိလား”
ကျွန်မ ပတ်ပတ်လည်မှာ ကျောင်းသားတွေက တစ်ယောက် တစ်ပေါက် ဝိုင်းအော်ပြီး သူ့တို့ ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတဲ့ ကတ်လေးတွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်မအတွက် ယူလာခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်ဥလေးတွေ သီခိုနေတယ်။ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး လိမ္မာတဲ့ သူတို့ ရဲ့ စေတနာ မေတ္တာတွေက ကျွန်မ ရဲ့ ပင်ပန်းမှု ဒဏ်ကို အဝေးသို့ လွင့်စင်စေခဲ့တယ်။
ကျောင်းသူတစ်ဦးရဲ့ အော်သံကြောင့် ကျွန်မရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကြာကြာ မခံလိုက်ပါဘူး။ ရန်ဖြစ်တဲ့ နေရာကို ကျွန်မ အပြေးလေး သွားလိုက်တယ်။ မမျှော်လင့်တဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုက ကျွန်မကို ဆီးကြိုနေပါတယ်။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က မောင်ဝေယံရဲ့ ခြေရင်းမှာ ဝပ်လဲလို့.. မောင်ဝေယံရဲ့ ပုံစံက ဒေါသအရမ်းထွက်နေတဲ့ နွားရိုင်းတစ်ကောင်လို့ အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းရှုလို့နေတယ်။
“ဘယ်သူအရင် ရန်စတာလဲ ဆရာမကို ပြောစမ်း”
“သူ…” ကျောင်းသားအားလုံးရဲ့ လက်ညိုးက မောင်ဝေယံဖက်ကို ဦးတည်လို့။
“မောင်ဝေယံ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ရန်ဖြစ်ချင် နေတာလဲ .. ပြောစမ်း” ကျွန်မရဲ့ အသံက လိုအပ်တာထပ် ပိုကျယ်နေမိတယ်။
“ခေါင်းမော့ပြီး ဆရာမကို ပြောစမ်း”
“ကျွန်တော့် မေမေဆီ ဖုန်းဆက်တာကို သူခိုးနားထောင်လို့”
မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ် တစ်ပေါက်ပေါက်ကျရင်း သူက ပြန်ဖြေတယ်။ သူမျက်ရည်ကျတာကို ကျွန်မတစ်ခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူး။ အိမ်စာမလုပ်လို့၊ သင်္ခန်းစာတွေ မလုပ်လို့ ကျွန်မသူ့ကို အပြစ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ သူလုံးဝ မငိုခဲ့ပါဘူး။ အခုမှ ဘာကြောင့် သူမျက်ရည်တွေက အတားအဆီးမရှိ တောက်တောက်ကျနေပါလိမ့်..
“ဖုန်းနားထောင်တာကို ရန်ဖြစ်ရသလား.. ဒီနေရာမှာ ကျောင်းသားတွေ အများကြီးပဲ ဒါကို ခိုးနားထောင်တယ်လို့ မခေါ်ဘူး သိလား.. မောင်ဝေယံ”
ကျွန်မ အပြောကို သူခေါင်းညိတ်ပြီးလည်း မထောက်ခံ၊ ခေါင်းခါပြီးလည်း မငြင်းဆန်ခဲ့ဘူး။ မျက်ရည်တွေသာ သူ့ပါးပေါ် အဆက်မပြတ်စီးကျလို့နေတယ်။
“ကဲ .. အားလုံး အတန်းထဲ ဝင်ကြ.. အောင်အောင်လည်း နောက်ဆို တစ်ခြားလူ ဖုန်းဆက်နေရင် ခိုးနားမထောင်ရဘူး ကြားလား”
ကျောင်းသားတွေ အတန်းထဲ ဝင်ကြတော့ အတန်း အပြင်ဖက်မှာ ကျွန်မနဲ့ မောင်ဝေယံနှစ်ယောက်တည်း ကျန်နေခဲ့တယ်။ သူနဲ့ ကျွန်မ စကားကောင်းကောင်း ပြောချင်သေးတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ သူ့ကို တစ်ခြားကျောင်းသားတွေထက် ကျွန်မပို သံယောဇဉ်ဖြစ်မိတယ်။
“ဆရာမ ဒါ ကျွန်တော် မတင်ရသေးတဲ့ ပုံပါ” မျက်ရည်တွေကို သုတ်ရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ် ကျနေတဲ့ စာအုပ်ကို ကောက်ယူပြီး ကျွန်မကို လှမ်းပေးလိုက်တယ်။
“ တပည့်တွေ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ပြီး မှန်မှန်တင်ရင် ဆရာမအရမ်းဝမ်းသာတယ် သိလား မောင်ဝေယံ။
ဆရာမ မင်းကို သဘောကျတယ်။ လိမ္မာစေချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေ မင်းကြောင့် ဆရာမ စိတ်ဓာတ်တော်တော်ကျမိတယ် သိလား။ မင်းလိမ္မာတယ်ဆိုတာ ဆရာမ သိတယ်။ ဒီနေ့လို ကိစ္စသေးသေး မွှားမွှားလေးနဲ့ မင်းရန်မဖြစ်သင့်ဘူး သိလား”
“ သူ့ ကျွန်တော့်ကို လှောင်လို့”
“လှောင်လို့? သူက ဘယ်လို လှောင်လို့လဲ”
“မေမေနဲ့ ကျွန်တော် စကားပြောတာကို သူ လှောင်တယ်” ပြောရင်း မျက်ရည်တွေက စီးကျလို့ လာပြန်တယ်။
“မောင်ဝေယံက မေမေနဲ့ ဘာတွေ ပြောခဲ့လို့လဲ.. ဆရာမကို ပြောပြ”
သူခေါင်းကို ငုံ့လိုက်တယ်။ ကျွန်မကို သူ့မေမေနဲ့ ပြောတဲ့ စကားတွေ သိပ်ပြောပြချင်ပုံ မပေါ်ဘူး။
“ဆရာမ မင်းကို မလှောင်ဘူး။ ရယ်လည်း မရယ်ဘူး ဟုတ်ပြီလား”
တအောင့်နေတော့ သူ့မေမေကို ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ကျွန်မကို အစအဆုံး ရွတ်ပြပါတယ်။
“မေမေ.. သိလား.. ခုတစ်လော သား ဆရာမပေးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို မှန်မှန်လုပ်လို့ ဆရာမက သားကို တော်ကြောင်းချီးကျူးတယ်။ ဆရာမက သားကို ချိုချဉ်တွေ ဆုချတယ် မေမေ။ ဒီနေ့လည်း ဆရာမဆွဲခိုင်းတဲ့ ပုံကို သားတင်မလို့။ ဒီပုံကို ဆရာမ ဆွဲခိုင်းတာ ကြာနေပြီ။ ခေါင်းစဉ်က “ကျွန်တော်၏ မေမေ”ဆိုလို့ သားက မေမေ့ပုံကို မဆွဲတတ်လို့ မတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ မေမေ.. မေမေ့ကို သားအရမ်းလွမ်းတယ် မေမေ။
မေမေ ဘယ်အချိန်အထိ အိပ်နေဦးမလဲ မေမေ။ ဘယ်အချိန်ကျမှ မျက်လုံးဖွင့်ပြီး သားကိုကြည့်မလဲ မေမေ။ ဒီနေ့က ဆရာများနေ့တဲ့ မေမေ။ မေမေ့အတွက် ဖေဖေနေ့တိုင်းပေးတဲ့ နှင်းဆီပန်းတွေကို ကြည့်ပြီး ဆရာမလည်း မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် နှင်းဆီပန်းကြိုက်မယ် ထင်ပြီး ဆရာမအတွက် ဖေဖေကို နှင်းဆီပန်းတွေ ပိုဝယ်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်။ မေမေ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် မေမေ”
ပြောပြောဆိုဆို မောင်ဝေယံက လွယ်အိတ်ထဲမှာ ဖိလို့ ပုံပျက်ပြီး ပြားချပ်နေတဲ့ နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်ကို ယူပြီး ကျွန်မကို ကမ်းပေးပါတယ်။
“ ဆရာများနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆရာမ”
ကျွန်မနှုတ်ခမ်းက ဘာသံမှ ထွက် မလာနိုင်အောင် ဝမ်းနည်းပြီး ကျွန်မငိုမိပါတယ်။
“သူက ကျွန်တော့်ကို အရူးလို့ ပြောသေးတယ် ဆရာမ။ သူက ပြောတယ် ကျွန်တော့်မေမေက သေပြီတဲ့။ နောက်ဆို ကျွန်တော် ရန်မဖြစ်တော့ပါဘူး ဆရာမ”
ကျွန်မသူ့ကို ရင်ခွင်ထဲ တင်းတင်းလေး ထွေးပွေ့ထားလိုက်မိတယ်။ နှလုံးတွေ အသဲတွေ ကွဲကြေမတတ် ကျွန်မငိုမိခဲ့တယ်။ အဖေက စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်၊ အထိန်းအကွပ်မဲ့တဲ့ အမေ မရှိတာတောင် သူက ဒီလောက် သိတတ် လိမ္မာနေတယ်။ အမေအသက်ရှင်နေဆဲလို့ မှတ်ယူပြီး အမေနဲ့ ဖုန်းပြောနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ၊ သေဆုံးသွားတဲ့ အမေ့ကို ပုံဖော်ပြီး ရေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေက ကျွန်မရင်ထဲ စူးစူးနစ်နစ် ထိုးဝင်လာခဲ့တ ယ်။
“ မောင်ဝေယံကို ဆရာမ တောင်းပန်ပါတယ် ကွယ်”
ရင်ထဲ နင့်နေအောင် ကျွန်မ ပြောမိပါတယ်။ ဆရာမ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မက ကိုယ်သင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အပေါ် သေချာ နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိအောင် ကျွန်မညံခဲ့ တယ်။
တစ်နေ့လုံး ဝမ်းနည်းစိတ်ကို ကျွန်မ ထိန်းမရ ခဲ့ဘူး။ မောင်ဝေယံကို ဖက်ပြီး ဘယ်လောက်ကြာကြာ ငိုခဲ့ မိမှန်း ကျွန်မ မသိဘူး။ ညနေ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ တပည့်တွေရဲ့ သင်္ခန်းစာတွေကို စစ်ဆေးတော့ မောင်ဝေယံဆွဲထားတဲ့ ပုံက ကျွန်မကို ထပ်တစ်ဖန် ဝမ်းနည်း မျက်ရည် ကျစေပြန်တယ်။ သူဆွဲထားတဲ့ ပုံက စားပွဲတစ်လုံး၊ စားပွဲပေါ်မှာ အမျိုးသမီးပုံ ထည့်ထားတဲ့ မှန်ဘောင်တစ်ခု၊ မှန်ဘောင်ရဲ့ ဘေးတစ်ဖက် တစ်ချက်စီမှာ နီရဲတဲ့ နှင်းဆီပန်းတွေ ထိုးထည့်ထားတဲ့ ပန်းအိုးလေး နှစ်လုံး …. ကျွန်မ မင်နီ နဲ့ အမှတ်ခြစ်ပြီး ပုံရဲ့ အောက်ဆုံးထောင့်မှာ အမှတ်ပေးလိုက်မိပါတယ်။ ၁၀၀ မှတ်…..
အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဖတ်ရှူမိသော ပုံပြင် တစ်ပုဒ်အား ဇာတ်လမ်းဆင် ရေးဖွဲ့ခံစားသည်။
သံလွင်အိပ်မက်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၁၁)တွင် ဖော်ပြပြီး
ပုံ မှန် ဝင်ငွေ ရှိေ သာ် လဲ လက် ထဲ မှာ ပိုက်ဆံ မ စု မိ သူ များ အတွက်
အ ထင်ေ သးစွာ ကြည့်ေ န သော မျက် လုံးတွေ ကို၊ ပိုက် ဆံ အထု ပ်လိုက် ပြပြီး အနို င် ပိုင်း ခဲ့သူ